Magaaleedka caanka ah si uu u taageero Soo noolaynta Magaalooyinka Mataanaha ah
Mu'asasada McKnight waxay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo in Ben Hecht-hogaamiye reer magaalka ah iyo maamulihii hore ee Magaalooyinka Nolosha - uu u adeegi doono lataliye sare ee Mu'asasada, ka caawinta caasimada qaranka ee dadaalka ay bulshadu hormuudka ka tahay ee lagu dhisayo hantida, horumarinta sinnaanta jinsiyadda, iyo kor u qaadida. xalalka cimilada.
Hecht waxa uu keenayaa in ka badan 30 sano oo waayo-aragnimo ah oo dhinaca bulshada iyo dhaqaalaha ah waxana uu hore ula soo shaqeeyay hoggaamiyeyaasha Minneapolis-St. Bawlos si kor loogu qaado horumar loo siman yahay oo uu kor u qaado marinka ballaadhan. Isagu waa aasaasihii iyo maamulaha hadda ee Reclaiming the Dream LLC iyo maamulihii hore ee Cities Living, wada shaqayn dheer oo ka mid ah 18 ka mid ah asaasyada hormoodka ah ee adduunka iyo hay'adaha maaliyadeed ee ka shaqeeya inay u beddelaan bulshooyinka aan la maalgelin meelo fursad ah.
"Waan ku faraxsanahay inaan ku soo dhaweyno Ben McKnight iyo bulshada ballaaran ee isbeddel-bixiyeyaasha kuwaas oo isticmaalaya fursadan hal-jiil-jiil si ay dib ugu dhisaan, dib ugu soo nooleeyaan, iyo dib u qiyaasaan waxa ay noqon karaan Magaalooyinka Twin." – TONYA ALLEN
"Waan ku faraxsanahay McKnight inuu haysto fursad uu kula shaqeeyo Ben mar kale oo uu ku soo dhaweeyo bulshada ballaadhan ee isbeddel-bixiyeyaasha kuwaas oo isticmaalaya fursadan hal-jiil-jiil si ay dib ugu dhisaan, dib u soo nooleeyaan, iyo dib u qiyaasaan waxa ay Twin Cities noqon karaan, "Ayuu yiri Tonya Allen, madaxa McKnight Foundation. "Waxaan si toos ah u arkay sida qotoda dheer ee Ben uu uga go'an yahay sinnaanta jinsiyadda iyo caddaaladda dhaqaalaha ee Detroit, halkaas oo uu ka caawiyay inuu keeno caasimadda aadka loogu baahan yahay gobolka ka dib tobanaan sano oo maalgelin ah. Waan ogahay inuu hanti weyn u noqon doono Minnesota inta lagu jiro wakhtigan isbeddelka."
Fursad ay Minnesota ku Hoggaamin karto
Minneapolis-St. Bawlos wuxuu isku arkay waqti gaar ah. Kacdoonka shacabka ka dib, baahida dib-u-soo-nooleynta ayaa ah mid aad uga degdeg badan waligeed, waxayna dalbanaysaa in aan samayno si ka wanaagsan sidii aan dib-u-dhis ugu samayn lahayn. Waqtigan xaadirka ah wuxuu nagu baaqayaa inaan hubinno sinnaanta jinsiyadeed iyo mustaqbal waara oo dhammaanteed. Si wada jir ah, waxaan u soo bandhigi karnaa hannaan cusub oo horumarineed oo udub dhexaad u ah bulshada iyo hanti-dhisidda dadka midabka leh, caqabadaha ku ah caadooyinka soo jireenka ah ee markii hore niyad jabiyay geeddi-socod ay bulshadu waddo, xaddiday gelitaanka raasamaal, iyo curyaaminta hal-abuurnimada.
Lataliyaha sare ee McKnight ahaan, Hecht waxa ay dhisi doontaa shaqada dib u soo noolaynta ee bulshadu wado iyada oo xooga saaraysa samaynta Magaalooyinka Mataanaha ah ee soo jiidashada maalgashadayaasha cusub iyo ka caawinta in ay ka soo saarto raasumaalka qaranka kuwa gaarka ah, samafalka, iyo qaybaha dadweynaha.
"Minneapolis-St. Bawlos waxa uu haystaa fursad aan hore loo arag oo uu naftiisa ugu beddelo hoggaamiye caddaaladda jinsiyadeed oo uu u adeego tusaale qaran oo loo siman yahay iyo horumarinta dhaqaalaha cimilada,” ayuu yidhi Hecht. "Waxaan rajeynayaa inaan gacmaha isqabsano oo aan la shaqeeyo hogaamiyayaasha bulshada firfircoon ee goobta jooga si aan u hubiyo in ciyaartoyda qaranku ay aqoonsadaan fursada iyo kartida cajiibka ah ee Minnesota."
Xirfad U Go'ay Dhex-dhexaadinta Sinnaanta Horumarinta Bulshada
Intii u dhaxaysay 2007 iyo 2021, Hecht wuxuu hoggaamiyay Magaalooyinka Nolosha inay noqdaan mid ka mid ah ururada caddaaladda dhaqaalaha ee hormuudka ka ah qaranka iyadoo udub dhexaad u ah sinnaanta jinsiyadda dadaalka lagu hagaajinayo deegaanka la dhisay. Habka guud ee Magaalooyinku waxay diiradda saartaa beddelka nidaamka guud iyo kuwa gaarka ah ee isku xidhan ee qaabeeya natiijooyinka nolosha dadka. Inta lagu jiro wakhtigan, Hecht waxa ay si dhow ula shaqeysay hogaamiyayaasha Minneapolis si ay u kordhiyaan balaayiin ku baxa horumarinta marinka Cagaaran iyada oo hubinaysa in xaafadaha ku xeeran, dadka degan, iyo ganacsiyada ay si balaadhan u wadaagaan faa'iidooyinka maalgashiga guud iyo kuwa gaarka ah ee adeega gaadiidka tareenka fudud. McKnight waxa uu leeyahay taariikh dheer oo shuraako ah oo uu la leeyahay Magaalooyinka Nolosha, maalgeliyaha ahaan iyo wakiilo ka shaqaynayay guddigeeda in ka badan labaatan sano. Kara Inae Carlisle waa xubin guddiga hadda.
Kahor intaadan ku biirin Magaalooyinka Nolosha, Hecht waxa ay la aas aastay oo hogaamisay One Economy Corporation, oo ah hay'ad aan faa'iido doon ahayn oo diiradda saareysa isku xirka dadka dakhligoodu hooseeyo ee dhaqaalaha guud iyada oo loo marayo nuxurka dhijitaalka ah iyo helitaanka ballaaran. Waxa uu hore u ahaa madaxweyne ku xigeenka sare ee Hay'adda Enterprise Foundation, halkaas oo uu kormeeray balaadhinta sanduuqa amaahda ee ururka ee $30 milyan ilaa $200 milyan.
Qareen iyo CPA, Hecht wuxuu wax ku baray Xarunta Sharciga ee Jaamacadda Georgetown 10 sano wuxuuna helay Abaalmarinta Professor Adjunct Professor Charles Fahy. Waxa uu qoray afar buug oo ay ka mid yihiin Soo celinta Riyada Mareykanka: Xalka La Xaqiijiyay ee Abuuridda Fursad Dhaqaale ee Dhammaan iyo Horumarinta Guriyeynta La Awoodi Karo: Hagaha Waxqabadka ee Hay'adaha aan faa'iido doonka ahayn.
Hecht waa bare ku takhasusay qorsheynta iyo naqshadeynta magaalada ee Dugsiga Sare ee Naqshadda ee Harvard iyo guddoomiyaha Xarunta Horumarinta Ganacsiga Bulshada ee Golaha La-talinta ee Jaamacadda Duke. Waxaa loo xushay mid ka mid ah 100ka hal-abuur ee ugu sarreeya magaalada adduunka oo dhan ee siyaasadda magaalooyinka iyo sidii Rockefeller Foundation Bellagio Resident Fellow.
Mawduuca: General, Maalgashiga Saameynta, Bulshooyinka Feejignaanta & Sinnaanta ah